၂။ လူအများအတွက် အကျိုးရှိတယ်ဆိုလျင် မပိတ်ပင်သင့်
နောက်ဆုံး စိတ်ဝင်စားတာက ...
တရုပ်အစိုးရက တရားဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု မခံရတာဘဲ။
ဘယ့်ကြောင့် သည်လို ဖြစ်ရတာလဲ?
ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားဓမ္မ မဟုတ်လို့ လား ?
လူမှာ အသုံးမကျလို့ လား?
သူတို့ပါတီဖြစ်တဲ့ ကွန်မြူနစ် ဆန့် ကျင်လို့ လား ?
ဒါတွေကို ကွန်မြူနစ်အစိုးရကပဲ ဖွင့်ပေးခဲ့တာတွေပဲ။ မြို့ နယ်နဲ့ခရိုင်အဆင့်ရှိသူတောင် ဆည်း ပူးကြတယ် သိရတယ်။ အခုတော့ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုဖို့တောင်းဆိုသူတွေကို ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်တယ် သိရတယ်။
လူမှုအကျိုးမဲ့ဆီ သွားမှာကြောင့် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမှု မလုပ်တာဆိုရင်တော့ တရားမှာပဲ။ ပါတီရဲ့ ရုပ်ဝါဒနဲ့ဆန့် ကျင်လို့ အသိအမှတ် မပြုတာဆိုရင်တော့ တရားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပါတီနဲ့ဆန့် ကျင်ပေမယ့် ပြည်သူကို အကျိုးပြုရင် အသိအမှတ် မပြုတာဟာ မတရားဘူး။ ပါတီ မဆန့် ကျင်ပေမယ့် ပြည်သူကို အကျိုးနည်းစေမယ်ဆိုရင် အသိအမှတ် မပြု တာ တရားတယ် ပြောရမယ်။ ဒါအတွက် တရုပ်အစိုးရ တရားသလား- မတရားဘူးလားပေါ့။
လူအများအပြားရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ကို တားဆီးပိတ်ဆို့ လို့တရုပ်အစိုးရ မတရားဘူး- လုပ်ဖို့ တော့ မဟုတ်ဘူး။ တရုပ် အစိုးရ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ် အစိုးရဟာ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာ စီမံခန့် ခွဲရသူပဲ။ သည်သူဟာ ပြည်သူကို နစ်နာစေမယ့် ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုဖြစ်ရင် ဒါကို အများပြည်သူထံ ပျံ့နှံ့ တာ မဖြစ်အောင် တားမြစ်ခွင့် ရှိသင့်တာပဲ။ တားမြစ်ခံရတာက အထူးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲ။ ဒါကြောင့် သည်ညွှန်ပြချက်ဟာ မလေ့လာမဖြစ် လေ့လာဖို့ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ညွှန်ပြချက်အဖြစ် လေ့လာပါတယ်။
အသည်အချက်ကို လေ့လာရာမှာ အချက်နှစ်ချက်နဲ့လေ့လာပါတယ်။
သည်ညွှန်ပြချက်ကို လေ့လာရာမှာ အချက်နှစ်ချက်နဲ့လေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဌမ တချက်က သည်ညွှန်ပြချက်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ညွှန်ပြချက် ဟုတ်- မဟုတ် နဲ့ လေ့လာချက် ပေါ့။
ဒုတိယ တချက်က သည်ညွှန်ပြချက်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ညွှန်ပြချက် ဟုတ်-မဟုတ်ထက် လူသား ကို အကျိုးများစေတဲ့ လူသားလျှောက်လှမ်းဖို့သင့်တဲ့လမ်း ဟုတ် - မဟုတ် လေ့လာချက်ပဲ။
၃။ လီဟုန်ကြည်သည် ဗုဒ္ဓထက် သူ သာလွန်တယ်လို့ယူဆ
ပဌမ လေ့လာချက်အဖြစ် ဦးဆုံးလေ့လာပါ့မယ်။
လီဟုန်ကြည်ရဲ့ ဓမ္မစကြာ လည်စေသော်- ဆိုတဲ့ ညွှန်ပြချက်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ညွန်ပြချက်လား?
သည်အဖြေအဖြစ် လီဟုန်ကြည်ကတော့ ဟုတ်တယ် ... ပြောမှာ တွေ့ ရတယ်။
သူ့ ညွှန်ပြချက်ထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မမှာ ရပ်တည် ညွှန်ပြနေတယ် ဆိုတဲ့ သဘောတွေ လည်း အများအပြားတွေ့ ရတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းဝင် အကြောင်းအရာတွေ ကို အခါ အားလျော်စွာ ထုတ်ပြတာတွေလည်း ရှိတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ တွေးခေါ်မြော်မြင်ပုံအဖြစ် သည်နေ့တည်ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ ရဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးတွေ တွေးခေါ်မြော်မြင်ပြတာတွေ တွေ့ ရတယ်။
သည်တော့ သည်ညွန်ပြချက်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ညွှန်ပြချက်ဖြစ်တယ် ပြောရတော့မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သည်ညွှန်ပြချက်ဟာ တကယ်ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားဓမ္မညွှန်ပြချက် ဟုတ်ပြီလား? လို့ တော့ မမေးဘဲထားလို့မဖြစ်ဘူး။ ဘယ့်ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူ့ ညွှန်ပြချက်ထဲမှာ ညွှန်ပြ သူဟာ “ ဘုရားထက်သာလွန်တယ် ” ပြောဆိုချက် ပါနေလို့ ပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဟာ ဆရာပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုသူတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘုရား ညွှန်ပြပို့ ချတာတွေ အရ အသိပေါက်သူတွေရဲ့ အမည်တွေပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ခံယူပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားထက် အသိတွေ အတတ်တွေ ပိုလွန်သွားပြီဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အဖြစ်က လွန်သွားသူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်တော့ဘဲ ဖြစ်ရမှာပဲ။
သည်နေရာမှာ ပြောစရာတော့ နည်းနည်း ရှိတယ်။ ဘာလဲ ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟာ ဗုဒ္ဓ ဘုရားထက် အသိတွေ အတတ်တွေ အားလုံး မလွန်ရတော့ဘူးလား? ဆိုတာပဲ။ သည်လိုတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘုရား ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ အသိပိုင်း အတတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိ အတတ်ထက် မလွန်ရမှာသာ ဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရား ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ အသိအတတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မဟုတ်တဲ့ အသိအတတ်တွေမှာတော့ ဗုဒ္ဓထက် ပိုချင်လည်း ပိုခွင့်ရှိပါတယ်။
ဟုတ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရဲ့ တပည့်အဖြစ် ခံယူတာဟာ ကိုယ်တတ်သိနေတဲ့ အတတ် အသိတွေထက် ဗုဒ္ဓဘုရားက ပိုမိုတတ်သိနေတယ် ခံယူပြီး တပည့်ခံယူတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တတ် သိနေတာတွေထဲက ဗုဒ္ဓဘုရား မတတ်မသိတာတွေ အများအပြားပဲ ရှိစရာ ရှိပါ တယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားဟာ အရာရာမှာ ကိုယ့်ထက်တော်သူ သိသူ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်တဲ့ ကိုယ်နဲ့ အတူ လူတွေ ဘယ်လိုမှ မသိနေကြတဲ့ လူလမ်း ကြောင်းအမှန်ကလေး တခုကို တီထွင်ဖောက်ထုတ်သွားနိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။ သည် အတတ်အသိဟာ လူ့ လောကအတွက် အတိုင်းမသိ အကျိုး ကျေးဇူး ကြီးမားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သည်အတတ်အသိဟာ လောကထဲမှာရှိနေတဲ့ အတတ် အသိတွေ အားလုံးကို တတ်တာ သိတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သည်အတတ်အသိဟာ လောကထဲရှိသမျှ အတတ်အသိအားလုံးကို တတ်သိတဲ့ အတတ် အသိ မဟုတ်ပေမယ့် အဲသည် အတတ်အသိတွေ အားလုံးထက် အရင်းကျ အရေးပါပြီး လူကို ကျေးဇူးအများစေဆုံး အတတ်အသိတော့ ဟုတ်တယ်။
အတတ်အသိတွေ မှန်သမျှဟာ နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်၊ များများ ဖြစ်ဖြစ် လူကို ကျေးဇူးပြုတာတွေ ချည်းပါပဲ။ ကောင်းအောင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ဆိုးအောင်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်ပါမယ်။ ကျေးဇူး တစ် ခုခုတော့ ပြုမြဲပါပဲ။ လူ့ အကျိုးကို သယ်ပိုးတဲ့ အတတ်အသိချည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည် အတတ်အသိတွေဟာ လူ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့လူကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ် ဆိုတာ သိတာနဲ့တတ်တာတွေ ဖြစ်တဲ့ အသိအတတ်တွေ ဖြစ်နေကြတယ်။
ဗုဒ္ဓညွှန်ပြတဲ့ အတတ်အသိဟာ လူကို မစင်ကြယ်အောင် ပတ်ဝန်းကျင်က ကပ်လာတွေက လ ယောင်ဆောင်နေတာတွေကို သိမြင်တဲ့ အသိနဲ့ ၊ ဒါတွေကို ဖယ်ရှားတတ်တဲ့ အတတ်ဖြစ်တဲ့ လူစင်ကြယ်စေတဲ့ အသိနဲ့အတတ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓညွှန်ပြတဲ့ အတတ်အသိမရဘဲ လောကထဲက အတတ်အသိမျိုးစုံး ရနေပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးကို တည်ဆောက်နိုင်ဦးတော့တောင်မှ ဗုဒ္ဓညွှန်ပြတဲ့ အတတ်အသိ မရရင် အဲသည် မရသူကို အဲသည် ပတ်ဝန်းကျင်က ကျေးဇူးတွေ တကယ် မပြုနိုင်ပါဘူး။ အဲသည်ကျေးဇူးတွေ တကယ် မခံစားရဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။
တနည်း ပြောရရင် အိုးခွက် ပန်းကန်ကို စင်စင်ကြယ်ကြယ် သုံးချင်လို့အိုးခွက်ပန်းကန်ကို စင်
ကြယ်အောင်ဆေးကြောချင်ရင် မဆေးကြောခင်မှာ ဆေးကြောမယ့် လက်ကို စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောသင့်ပါတယ်။ ဆေးကြောမယ့် လက်က မစင်ကြယ်ရင် အိုးခွက် ပန်းကန် စင်စင် ကြယ်ကြယ် သုံးချင်တာလည်း အပိုပဲနေမယ် မဟုတ်လား။
ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ အတတ်အသိတွေဟာ လူကို ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေနဲ့ပံ့ပိုးဖို့မဟုတ်ဘဲ အပံ့ အပိုးခံလူကို စင်ကြယ်စေဖို့ သာ ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကြယ်စေဖို့် ဟာ လူအတွက် ပဓာန အကျဆုံး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ အတတ်အသိဟာ အတတ်အသိများထဲက တမျိုးသား ဖြစ်ပေမယ့် လူ့ မှာ ရှေ့ တန်းအကျဆုံး အတတ်အသိ ဖြစ်တယ်။
သည်အတတ်အသိကို တတ်သိရာမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သူ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူမှ ဗုဒ္ဓထက် သာလွန်သူ မရှိရပါဘူး။ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် ရလေးတီဗီတီ (Relativity) ဆိုတဲ့ သီဝရီ (Theory) ကို အိုင်းစတိုင်း (Einstein) ဆိုသူ ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ သည်သီဝရီကို အိုင်းစတိုင်းထက် ပိုသိသူဆိုတာ မရှိကောင်းပါဘူး။ ပိုသိတယ် ဆိုရင် အဲသည် သူဟာ အိုင်းစတိုင်း အမှားကို သိသူပဲ ဖြစ်မယ်။
အခုလည်း လီဟုတ်ကြည် ပိုသိတယ် ဆိုရင် ဗုဒ္ဓမှားလို့ဖြစ်ရပါမယ်။ ဗုဒ္ဓ အသိနဲ့အတတ်ဟာ အဖက်ဖက်က မမှားဘူး ဆိုရင် လီဟုန်ကြည်သိတဲ့ ဗုဒ္ဓတရားဆိုတာ မှားလို့ဖြစ်ရပါမယ်။ နှစ်ဦးလုံးလည်း မမှားကြဘူး။ လီဟုန်ကြည်ဟာ ဗုဒ္ဓထက်ပိုလွန်တဲ့ အတတ်အသိရှိသူ ဖြစ်တယ် - ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ရဘူး။
မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုရပေမယ့် ဖြစ်နေပြီလို့လီဟုန်ကြည်က ဆိုးထားတော့ လီဟုန်ကြည်က သည် အဆိုအရ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက် မဟုတ်ရဘူး ဖြစ်ရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဗုဒ္ဓညွှန်ပြတဲ့ အလင်းကို ခံယူသောက်စို့ သူလို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ စကားပဲ။ လီဟုန်ကြည်က အဲသည် လိုသူ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ လီဟုန်ကြည်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောဖို့အကြောင်းမရှိ ဖြစ်တာပေါ့။ ဗုဒ္ဓ အလင်းထက်လွန်တဲ့ အလင်းကိုတောင် ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဟာ သူ့ ဆရာလည်း မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ ဗုဒ္ဓကို ဆရာလို့မညွှန်ပြနိုင်တော့သူကို ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဘယ်လို ပြောမလဲ။
၄။ ပရမတ်သမားတွေဟာ သူတို့ အသိဟာ ဘုရားအသိနဲ့ထပ်တူလို့ဆိုကြ
ဗမာပြည်က တချို့ တရားသမားတွေ ဆိုသူတွေလည်း လီဟုန်ကြည် နီးနီးလောက် ပြောဆိုကြ တာတွေရှိပါတယ်။ သူတို့သိတာဟာ ဘုရားသိတာနဲ့ထပ်တူဖြစ်ပြီး ၊ ဘုရားလည်း သူတို့သိနေတာထက် ပိုလွန်သိသူ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာမျိုးတွေပဲ။
အဲသည်သူတွေဟာ ပရမတ္ထသစ္စာသမားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ဟာ ပရမတ်တရားတွေကို ရှုကြည့်လေ့လာ ကြတယ်။ ရုပ်ပရမတဖြစ်ဖြစ်၊ နာမ်ပရမတ် ဖြစ်ဖြစ် တခုခုထဲက ပရမတ် တခုခုကို မြင်အောင် ကြည့်နိုင်ပြီ ဆိုရင် အဲသည် ပရမတ်ရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ ဥပါဒ်နဲ့ဘင် (၀ယ) ကိုမြင်တော့တာပဲ။ တစ်ခုကို သည်လိုမြင်လျင် ကျန်တဲ့ ပရမတ်တွေကိုလည်း အတူတကွ ဖြစ်နေတော့ မြင်တော့တာပေါ့။
သည်လိုမြင်တော့ ပရမတ်ဟာ အလကားပဲလို့သဘောပေါက်ပြီး ပရမက်ကို စိတ်မ၀င်စားဘူး၊ စိတ်ကုန်တယ်ပေါ့။ ပရမတ် စိတ်ကုန်သူဟာ ပရမတ်အာရုံကို အာရုံအဖြစ် မယူကြတော့ဘူး။ ပရမတ် အာရုံရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ ၀ယ- ဆိုတဲ့ အပျက်- ကြောင့် မရှိဖြစ်နေရတဲ့ လဟာ- လို့ဆိုရတဲ့ “ ဘာမှ မရှိတဲ့ အဖြစ် ” အာရုံကို အာရုံအဖြစ် သူတို့ စိတ်ကို မှီထားကြတယ်။
အဲသည် လဟာ အာရုံကိုလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်က အပ္ပ၀တ္တ နိဗ္ဗာနံ ဆိုပြီး ကျမ်း စာတစ်စောင်က “သုညတ အနိမိတ္တ အပ္ပဏိဟိတနိဗ္ဗာန် ဆိုတာ ဒါပေါ့” လုပ်ပေးခဲ့တော့ သည်နေ့သူတွေက အမြတ်ဆုံး ပန်းတိုင်တွေ့ ပြီ ဆိုပြီး တတ်ထောင်ကုန်ကြတာပဲ။ သည်သူ တွေဟာ လူ့ အချည်းနှီးတွေ၊ ဘာအသုံးမှ မကျကြသူတွေပဲ။ ဘယ်ကြောင့် ဘာအသုံးမှ မကျ ကြတာလဲ - ဆိုရင် ဘာသိစရာမှ ရှိတာ မဟုတ်တာကို သိနေသူတွေ ဖြစ်ကြလို့ ပဲ။
သည်လိုဖြစ်လျက်နဲ့သည်သူတွေဟာ သည်အာရုံကို ဘယ့်ကြောင့် မက်စက်နေတာလဲ? မေးချင်ဖွယ် ဖြစ်တယ်။ သည်အာရုံဟာ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ တခြားအာရုံတွေလို စိတ်ကို မလှုပ်ရှား မခြောက်ခြား စေဘူးပဲ။ စိတ်ကို လှုပ်ရှား ခြောက်ခြားစေတဲ့ အာရုံတွေဟာ စိတ်ကို ခါရမ်း ပန်းနွမ်းတာတွေ ဖြစ်စေတယ်။ အပန်းအနွမ်း သက်သာလို့ သည်အာရုံကို တန်ဖိုးထားမိ ကြတာပဲ။
စိတ်ဟာ အပန်းအနွမ်းမခံရအောင် ထားနိုင်ရင် ရုပ်မှာလည်း ရောဂါဘယတွေ မဖြစ်ပွားစေဘူး။ ဖြစ်ပွားပြီးတွေလည်း ပျောက် ကောင်းစေနိုင်တယ်။ အသက်လည်း ရှည်စေနိုင်တယ်ပေါ့။ သည်တော့လည်း ဒါကို မတ်တော့တာပေါ့။
သည်သူတွေဟာ ကျန်းမာသက်ရှည်တွေ ဖြစ်ကြပေမယ့် စိုက်ပင်တွေအတွက် ပြုစုထားတဲ့ မြေ ရေ သြဇာစားပြီး စိုက်ပင်တွေကြားမှာ ဖွံ့ ဖြိုးကြီးထွားနေတဲ့ ပေါင်းပင်ကြီးတွေ လိုပဲ ဖြစ်တယ်။ ပေါင်းပင်ဟာ ဘာအသုံးကျသလဲ? အဲသည်သူဟာ ပေါင်းပင်လိုပဲ ဆန်ကုန်မြေလေးပဲ။
သူ့ ဆီမှာ သည်ထက်ပိုးဆိုးတာလည်း ရှိတယ်။ ပေါင်းပင်ဟာ ဘာမှ အသုံးချမရရုံမက စိုက်ပင် အတွက် ပြုစုမှု ခပ်သိမ်းကို သုံးစားပစ်နေရုံမျှလည်း မကလည်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒါက သူ့ ဆီ က ရောဂါတွေကို စိုက်ပင်တွေမှာ အကူးစက်ခံရစေတာပဲ။
သည်လိုပဲ အသုံးမကျဆုံး အာရုံကို အသုံးအကျဆုံး အဖိုးအတန်ဆုံး အာရုံအဖြစ် သိမှတ်အာရုံ ပြုနေသူရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ပလာဖြစ်နေပါတယ်။ ပလာကျင်းနေတဲ့ ဦးနှောက်ထဲကို အာရုံအချက် အလက် တခုခု ခွန့် မပေးလိုက်နဲ့ ၊ ပေးလိုက်ရင် အဲသည်အာရုံရဲ့ အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို ပုံမှန် ကောက်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်း သူ့ ဆီမှာ ချို့ တဲ့နေတယ်။ သူ့ ကိုယ်သူ ချို့ တဲ့မှန်းလည်း မသိဘူး။ သည်တော့ အဲသည် ခွန့် အပေးခံရတဲ့ အာရုံကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ချင်သလို ဖော်ပစ်လိုက်တယ်။
အဲသည် အဓိပ္ပါယ်ကလည်း သူကိုယ်တိုင် မြင်လာကြားလာ တွေ့ လာတယ်။ ဘာ့ကြောင့် သည်လို ဖြစ်လာတယ်လည်း သူမသိဘူး။ တကယ်တော့ ဦးနှောက် ဖရိုဖရဲဖြစ်ရာက ဖြစ်လာ တာတွေပဲ။ သည်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ချက်ဟာ လက်ငင်းမှာ စံလွဲနေရင်တော့ ရှုးနေတယ်- ပြောရ တာပေါ့။ လက်ငင်းမှာ စံလွဲတဲ့ အဖြစ် မရှိဘူးဆိုရင် နတ်စီးတယ်၊ ဓါတ်စီးတယ်၊ ဘုရားကြွတယ် စသည် ပြောရတာပဲ။ ရှေ့ ဖြစ်ဟောတာတွေဟာ အဲသည်တွေက လာတာတွေ ပဲ။ ဒါတွေဟာ ဘာသာရှိ၊ ဘာသာမဲ့ အားလုံးတို့ ဆီမှာ ရှိနေတယ်။
သူတို့ ကို လူအများက အထင်ထားကြတယ်။ သည်တော့ သူတို့ ကလည်း သူတို့ ကိုယ်ကို သူတို့အထင်ထားကြပြန်တော့တာပဲ။ “ဗုဒ္ဓဘုရားလည်း ငါတို့ လောက်သိတာပါပဲ” ဆိုတာမျိုး ပေါ့။ လီဟုတ်ကြည် ကတော့ “ဗုဒ္ဓဘုရားတောင် ငါ့လောက်မသိဘူး” - ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါ့။
၆။ အရိယသစ္စာတရားရဲ့ အရည်အချင်းဂုဏ်ရည်
သည်အရိယသစ္စာတရားဟာ ရိုးသားသူအဖြစ် တည်ဆောက်တဲ့ အခါမှာ အလိုလည်း မရှိ၊ အပို လည်း မရှိတဲ့ တရား ဖြစ်ပါတယ်။
သည်အရိယသစ္စာတရားဟာ အပြစ်တင်စရာ ပြောဆိုချက် လုံးဝမရှိတဲ့ တရားဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် အသိမျှ သိသူကပင် သည်လို အပြစ်တင် အပြောမပါကြောင်း သိနိုင်တဲ့ တရားဖြစ်ပါ တယ်။
သည်အရိယသစ္စာတရားဟာ ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်တဲ့ တရားဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အသိမျှ သိသူ ကပင် ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်တဲ့ တရား ဖြစ်ပါတယ်။
သည်အရိယသစ္စာတရားဟာ ကာအချိန်ရဲ့ အတိုက်အစားခံနိုင်တဲ့ တရားဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် အသိကို သိသူကပင် ကာလအတိုက်စား ခံနိုင်ကြောင်း သိရတဲ့ တရား ဖြစ်ပါတယ်။
သည်အရိယသစ္စာတရားဟာ သူများကို တင်ပြလို့ရတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အသိ သိသူ ပင် သူများကို တင်ပြလို့ ရတဲ့ တရား ဖြစ်ပါတယ်။
သည်အရိယသစ္စာတရားဟာ ကပ်ဆောင်ထားလို့ လည်း ရတဲ့တရား ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်မျှ သိသူပင် ကပ်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့ တရားဖြစ်ပါတယ်။
သည်အရိယသစ္စာတရားဟာ လက်ငင်းလက်တွေ့အကျိုးသိရတဲ့ တရား ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် အသိမျှ သိသူကပင် လက်ငင်းလက်တွေ့အကျိုးသိရတဲ့တရား ဖြစ်ပါတယ်။
သည်အရိယသစ္စာတရားကို ဟောပြောဖော်ထုတ် တွေ့ ရှိသူဟာ ဗုဒ္ဓဘုရား ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ ဘုရားဆိုတာ ဒါကို ဖော်ထုတ်နိုင်အောင် သိရှိသူရဲ့ အမည်နာမ ဖြစ်ပါတယ်။
သည်အရိယသစ္စာကို ပိုသိချင်လို့ လည်း ဘယ်သူမှ ပိုသိလို့မရပါဘူး။ ဖော်ထုတ်သူ ဗုဒ္ဓဘုရား ထက် သည်အရိယသစ္စာ အရာမှာ အပိုအလိုလုပ်လို့မရပါဘူး။
သည်အရိယသစ္စာတရားမှာ ဘာတွေ ပိုထည့်ပေးမှ ရိုးသားသူ ပိုဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့ လည်း မရဘူး။ ဘာမပါဘဲနဲ့ လည်း ရိုးသားသူ လုပ်လို့ ရတယ်လို့ လည်း ပြောလို့မရဘူး။ ရိုးသားသူ ဖြစ်ဖို့ အတွက် အရိယသစ္စာစက် အပိုအလိုမရှိတဲ့ တရား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကြောင့် ... ...
လီဟုတ်ကြည်ဟာ ဗုဒ္ဓထက် သာလွန်ပြီ- ဆိုတာ ဘာသာလွန်တာလဲ? မေးခွန်း မေးဖို့ရှိပါ တယ်။ တခြားဖြစ်တဲ့ ရေထဲမှာ မီးမွှေးပြတတ်တာတို့ ၊ လေထဲမှာ အလေးအပင် ပစ္စည်းတည် နေအောင် လုပ်ပြတာတို့အစရှိတာတွေမှာ သာလွန်တယ် ပြောနိုင်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓ ဘုရားရဲ့ အသိအတတ်နယ်ပယ် မဟုတ်တာမှာ သာလွန်တာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘုရားထက် သာတယ် မပြောရပါဘူး။
ဥပမာ- အိုင်းစတိုင်းဟာ ရလေးတီဗီတီကို ဖော်ထုတ်နိုင်သူ ဖြစ်ပေမယ့် ကောင်းကင်ကျွမ်းဘား ကစားရာမှာတော့ ဆပ်ကပ်ထဲက လူကို မမီနိုင်တန်ရာပါ။ သည်လိုဖြစ်တာနဲ့ကျွမ်းဘား သမားဟာ အိုင်းစတိုင်းထက်သာသူလို့ပြောကောင်းတယ် ထင်လို့မရသလိုပါပဲ။